Sarimihetsika malagasy: hivoaka rahampitso ny DVD « Melok’elà » - ewa.mg
Sarimihetsika malagasy: hivoaka rahampitso ny DVD « Melok’elà »
News - Sarimihetsika malagasy: hivoaka rahampitso ny DVD « Melok’elà »
Tafaraka ireo samy andrarezin’ny
sarimihetsika malagasy! Hivoaka DVD, rahampitso alakamisy 17
septambra, maneranany Nosy, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
« Melok’elà » novokarin’ny Tatatata Production. Ireo
mpilalao kalaza sy manana ny mampiavaka azy eo amin’ny filalaovana
sarimihetsika no tazana manome aina ny “Melok’elà”. Anisan’izany i
Tsarafara (Rajao), i Jocelyn (Pasitera), i Sahondra (Raly), i
Israel (Fetra), i Sombiniaina (Chantal), sns. Saika ireo tazana
nilalao ilay andian-tantara “Malok’Ila” izy ireo. Mpifamofo eo
am-piomanana ny hivady i Pun sy i Lafatra. Eo am-panatanterahana
iraka miatrika dahalo anefa i Lafatra vao mahafantatra fa naman’ny
dahalo ity fofom-badiny. Ho raikitra ihany ve ny fanambadian’izy
Fanambin’ny Tatatata Production ny
hatsaran’ny kalitaon’ity vokatra voalohany havoakan-dry zareo
rahampitso ity. Ireo efa manana traikefa matanjaka amin’ny
fandavorariana sarimihetsika tahaka izao no niantsoroka ny lafiny
teknika. Anisan’izany i Germain Andriamanantena teo amin’ny
L’article Sarimihetsika malagasy: hivoaka rahampitso ny DVD « Melok’elà » a été récupéré chez Newsmada.
Hajao ny hafainganam-pandeha
Tongasoa foana ny hevitra mankany amin’ny fanatsarana sy ny fivoarana. Antoky ny fahombiazana kosa ny fahaizana manaraka ny ambaratonga sy dingana rehetra mba hisorohana amin’ny sakana mety hibahana ny lalana aoriana kely ao. Resaka fitaterana mihitsy no ametrahana ahiahy taorian’ny fikasana hametraka an’irony fitaovana fanarahan-dia irony amin’ireo taksibe tsirairay avy. GPS no fahalalan’ny maro azy, avy amin’ny fanafohezana ny hoe « Global Positioning System » na azo adika tsotsotra amin’ny teny malagasy ho fitaovana fanarahan-dia na toerana. Tsy handefa saina lavitra akory isika fa raha mitazana an’ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra fotsiny, dia mbola mahita fiara tranainy; fiara efa trotraka saingy zara fa misy fonony sy mbola afaka mifamoivoy; fiara tsy manana hidim-baravarana; fiara tsy manana hisatra sintomin-tanana; fiara tsy velona raha tsy atosika; fiara mampiasa hazo kesika ho solon’ny seza; fiara iasan’ireo mpamily sy mpanampy azy sasany, izay toa tsy mba mahay ny farafaharatsiny amin’ny fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba akory; fiara iasan’ireo mpamily minia mandika ny lalànan’ny fifamoivoizana… sy ny fanamarihana maro hafa tsy voatanisa. Mety ho fandoto iray tandroka manaratsy ny fandio iray siny ireo atsidika eo ambony ireo. Misy dia misy tokoa ny fikambanan’ny mpitatitra miezaka manome kalitao sahaza ny mpandeha. Ny tena tiana hahatongavana dia ny fitsambikinana avy hatrany amin’izato tetikasa fametrahana an’ireo “GPS” amin’ny fiara fitaterana. Raha ny tatitra voaray fotsiny dia am-polony maro ireo mpisehatra amin’ny fitaterana no niharan’ny sazy raha nampiharina tamin’ny zotra D mihazo an’iny Ivato iny ilay fametrahana zotra filamatra nataon’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT). Mbola firifiry anefa ireo kaoperativa sy zotram-pitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina ? Moa efa samy mahatakatra ny tanjona tian-kokendrena avokoa izy ireo ? Nisy fotoana nametrahana an’ilay fepetra fahadiovana tsy maintsy nohajain’ireo mpamily sy ny mpanampy azy, taona maromaro lasa izay, ka mitondra fanamiana araka ny tokony ho izy ry zareo. Mbola betsaka no voretra tamin’izany. Mila miainga any amin’ireny mpikatroka fototra amin’ny sehatry ny fitaterana ireny anefa ny fanajàna an’ilay asa. Manginy fotsiny ny fitsipika tokony hifehy ny familiana fiara mba ho fahafaha-po ho an’ireo mpandeha; tsy hanelingelina ny fifamoivoizana; ary indrindra mba tsy ho loza mitatao eny an’arabe. Tsy mbola ilay “GPS” angamba no vahaolana voalohany mba tsy hirotorotoana be loatra. Raha tena mikatsaka fana­tsarana sy fampivoarana tokoa ny tontolon’ny fitateram-bahoaka eto amintsika dia zava-dehibe ihany koa mantsy ny fanajàna ny hafainganam-pandeha ! L’article Hajao ny hafainganam-pandeha est apparu en premier sur AoRaha.
Ady amin’ny valanaretina : nahazo fitaovam-pitiliana avy amin’ny Star ny eny Ambatolampy
Taorian’ny kaominina Anta­nanarivo Renivohitra, nitondra fanampiana ho an’ ny kaominina Ambato­lampy ihany koa ny Star. Nanolotra fitaovam-pitiliana TDR ny orinasa, ho tohin’ny asa so­sialy efa natombok’izy ireo tany an-toerana, hatramin’ny taona 2014. Nanom­boka tamin’io ny fotoana nisian’ny ozinin’ny Star tany Ambato­lam­py ka mandray ny andraikiny hatrany ny Star, amin’izao hamehana izao, na dia eo aza ny fanakatonana mandritra ny fotoana voafetra izany. Notanterahina ny alatsinainy lasa teo ny fanomezana tamin’ny fomba ofisialy ireto fitaovana ireto, avy amin’ny delegasiona notarihin-dRako­toarivelo Andrianaivo­jaona Lala, talen’ny ozinina Star Ambatolampy, ary no­raisin-drakotomalala Mika, ben’ny Tanàna sy ny ekipany. “Iraisa­na ny ady amin’ny coronavirus ka rariny raha mifantoka any ny tohin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta”, hoy ny nambaran’ny ben’ny Tanàna. “Mendrika tolorana ny fisaorana ny Star, amin’ny fijerena manokana ny kaominina Ambato­lampy. Hampiasaina araka ny filan’ny mponina ireo fitaovana ireo”, hoy kosa ny ben’ny Tanàna.Zo ny AinaL’article Ady amin’ny valanaretina : nahazo fitaovam-pitiliana avy amin’ny Star ny eny Ambatolampy a été récupéré chez Newsmada.
Afrika sy Madagasikara: 40 miliara dolara isan-taona ny fanafarana sakafo
40 miliara dolara isan-taona ny lany amin’ny fanafarana sakafo ampidirina aty Afrika, araka ny tatitra nataon’ny Vondrona afrikanina (UA) miaraka amin’ny Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique). 50 % ny tany mamokatra tsy voatrandraka ho an’ny fambolena. Ambany dia ambany ny vokatry ny fambolena aty Afrika, 10 % amin’ny ankapobeny raha oharina amin’ny vokatra any Azia. Mandalo eto Madagasikara izao ny teknisianina avy any Maraoka mampiofana teknisianina sy mpikaroka malagasy ny amin’ny hamerenana ny tsiron’ny tany eto an-toerana, hamokatra bebe kokoa. Isan-taona mihena hatrany io taham-pamokarana io na tsy mampiasa zezika firy aza ny Malagasy.Tsy maintsy hampitomboana hatrany amin’ny 100 % ny vokatra eto an-toerana, hiadiana amin’ny fahantrana, hita any ambanivohitra sy amin’ny tanàn-dehibe. Faritan’ny UA hahatrarana izany ny fampandrosoana izany ny toekarena miainga avy amin’ny tontolon’ny fambolena. Tsy hita eto Madagasikara ny politika maharitra momba ny fampandrosoana ny fambolena.Tetikasa mandalo sy vonjy maika ihany hatramin’izao ny hita eto matoa mbola tsy tonga amin’izay fahavitan-tena ara-tsakafo izay. Manamarina izany ny fiakaran’ny vidim-bary, nanomboka ny taona 2008. Ny taona 2014, nambaran’ny UA fa taona ho an’ny fambolena, tokony nametraka politika tsara fototra sy lavitrezaka ny firenena afrikanina isanisany, saingy tsy izay ny zava-mitranga fa misongadina, indrindra ny fandripahana ala, tonga amin’izao fiovan’ny toetr’andro izao, manimba ny taom-pambolena.Azo tanterahina tsara anefa ny revolosiona maitso, toy ny hita any Azia, mifototra amin’ny fambolem-bary. Ahitan’ny Aziatika fahombiazana izany, na avy amin’ny asan’ireo mpamboly madinika aza. Tsara alain-tahaka ho an’i Madagasikara. R.MathieuL’article Afrika sy Madagasikara: 40 miliara dolara isan-taona ny fanafarana sakafo a été récupéré chez Newsmada.
Havatsa-Upem 67 taona: hasandratra i FX-Mahah
Hetsika iray anisan’ny mampiavaka ny fikambanan’ny poeta sy mpanoratra malagasy Havatsa-Upem ny fanandratana mpanoratra iray mbola eo am-perimpanoratana. Anisan’izany ny « Mbarakalin’ny Havatsa-Upem ho an’i FX-Mahah » hotontosaina ao amin’ny Nosy-TV Behoririka, ny 7 septambra izao manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Hamelona an-tsehatra ireo tononkalo nosoratany (30 eo ho eo) ny mpikambana Havatsa-Upem, horavahin’ny hiran’ny tarika Tafasiry Kolokanto, ny tarika Abel Ratsimba ary ny tarika Abel Andriarimalala.Razafimahatratra François Xavier no tena anaran’i FX-Mahah. Izy ny filoha nanorina ny Havatsa-Upem sampana Frantsa. Ankoatra izay maha poeta sy mpanoratra azy izay, mpanao sary hosodoko ihany koa i FX-Mahah.Fantatra fa efa notolorana ny « Chevalier des palmes académiques de Claude Kupfer » ity mpanoratra ity tany amin’ny taona 2009.HaRy Razafindrakoto L’article Havatsa-Upem 67 taona: hasandratra i FX-Mahah a été récupéré chez Newsmada.
Hiditra amin’ny andiany faharoa ny hetsika « Rodorodo Haona Fi » karakarain’ny Fiangonan’ny Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny 30 oktobra ka hatramin’ny 2 novambra ho avy izao, eny amin’ny Tanàna Voara Andohatapenaka. Tanjona ny hizara ny Filazantsara ho an’ny mpitsidika sy ny fampisehoana fiombonana sy fifankatiavana amin’ny sahanasa rehetra ho hita eny an-toerana. 200 ny tranoheva hampiranty sy hivarotra entana sy vokatra samihafa ho an’ny mpitsdika 30 000 andrasana mandritra ny hefarana. Hiavaka ny hetsika satria hahazo vahana ny sosialy amin’ny fizahana maimaimpoana momba ny fitiliana ny dibeta, ny fijerena ny maso sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo. « Hakana sarany 5 000 Ar kosa ny fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza sy ny nono raha misoratra anarana any amin’ny Fiangonana ilay vehivavy. 10 000 Ar ny vola hefaina raha tonga eny an-toerana ka maniry ny hatao ireo karazam-pitiliana ireo », hoy ny komity mpikarakara, i Disaile Lala, teny Analakely, omaly.Hampiofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ny teknisianina manokana ho an’ireo vonona hitrandraka izany fihariana izany. Hanome fahalalana manodidina ny fahaiza-mitarika sy ny fandraharahana ny mpikarakara ho an’ireo liana. Ankoatra izay, hisy tolotrasa 400 miandry ny mpitady fivelomana miaraka amin’ny orinasa maro.Ho an’ny andiany faharoa, manamarika azy ny “Kolorallye” hiandrasana fiara 40 ahitana mpanamory roa ka hatramin’ny efatra isaky ny fiara izay hifaninanana amin’ny familiana fiarakodia. “Sady fialamboly no fanampiana ny sosialy ny hetsika”, hoy ny sekretera jeneralin’ny FJKM, Radimison Jonah.Vonjy L’article « Rodorodo Haona Fi »: hanolotra tolotrasa 400 ny mpikarakara a été récupéré chez Newsmada.